Dịka oge udummiri ji nwayọ na-akwakọrọ ngwo ngwo ya, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ agaal n'ihu na-eguzobe ma na-enyefe ọrụ ngo maka ịrụ ụzọ dị iche iche na steeti ahụ.
N'ịgbaso nke ahụ ka ya bụ aka na-achị achị gara n'ịhụ nyefee ọrụ ngo ịrụ ụzọ ahụ siri Nnọkwa gaa Akwaeze gaa Adazi-Enu wee gaa Ọraeri.
Ka ọ na-eguzobe ịrụ ya bụ ụzọ, bụkwa nke jikọtara obodo dị iche iche dị n'okpuru ọchịchị Idemili Saụụtụ, Anaọcha na Agụata; gọvanọ Obianọ mere ka a mara na a ga-arụ ya bụ ụzọ n'ogoogo dị elu, tinyesie ihe dị iche iche na-adị n'ụzọ na ya, ma rụchakwa ya n'agbata ọnwa ole na ole.
N'okwu nke ha, ndị ndu nke obodo ahụ ụzọ ahụ metụtara kelere gọvanọ Willie Obianọ maka ịgbatara ha ya bụ ọsọ enyemaka, bụkwa nke na-egosi na n'ezie, ọ bụ 'Akpọkuo Dike'.
N'aha ha na ndị ha na-achị, onye ndu nke obodo Adazi-Enu bụ maazị Chukwuma Ezeadụm mere ka a mara na obi bụ ndị obodo ahụ niile sọ añụrị banyere nke ahụ nakwa ọrụ ndị ọzọ dị iche iche gọvanọ ahụ rụgooro ha, ma kwekwazie ya nkwa na ha niile kwụ ya n'azụ ma na-sịkwa ya gaa n'ihu n'ịzọ ọchịchị ya nke ugboro abụọ, maka na ọ chịrị mma ga-achị ọzọ.